Amanoveli empi amahle kakhulu
Ukubuyekezwa kwamanoveli empi
Ngaphansi kweSkylet Sky, kaMark Sullivan
Othandweni nasempini konke kuvunyelwe. Futhi masingasho ukuthi zombili izakhiwo ziyahlangana ... Indlela enjalo kuphela futhi ethathwe endabeni eyiqiniso ingaholela uMark T. Sullivan kude nohlobo olujwayelekile lwemfihlakalo nokusola lapho kade ehamba naye ...
Ukhozi Esivunguvungwini, nguBen Kane
Uchungechunge lwe-Eagles of Rome lufinyelela esiphethweni sayo ngalesi sitolimende sesithathu. Umbhali waseKenya uBen Kane ngaleyo ndlela uvala ukwakheka kwakhe kokugcina kwenganekwane engokomlando ebhekiswe ezicini zayo ezifana nezempi. Izikhathi ezikude lapho amasimu evikelwe khona noma iminonjana yegazi yanqotshwa ...
Ngo-1982, nguSergio Olguín
Ukwehlukanisa nabasunguliwe akulula. Ukukwenza maqondana nezinhlelo zomndeni kukhulu kakhulu. UPedro uyazonda umsebenzi wezempi, okhokho bakhe ababengowakhe. Eminyakeni engamashumi amabili, umfana ugxile kakhulu emkhakheni wokucabanga, futhi ukhetha isayensi ...
Indlu Yezinhlamvu Zamagama, kaJussi Adler Olsen
Nge-tinge efana nempi, umbhali wale noveli usethulela indaba eyingqayizivele, esondelene nohlobo lomlobi walo uqobo lomlobi, waphinde wakhululwa ngamalebula ahlukene selokhu aqala ukushicilelwa ngo-1997. e ...
Ubuso bakhe ngesikhathi, ngu-Alejandro Parisi
Kwesinye isenzakalo sengivele ngikhulume ngothando olungachazeki, ikakhulukazi ukubuyekezwa kwencwadi ethi The Book of Parables, ebhalwe ngu-Olov Enquist. Kulokhu sithola nemithamo emikhulu yothando olungavunyelwe olweqiwe okokuziphatha nolwemvelo, njengoba ngokuvamile sinikwa ukuqonda. ...
Amafulegi enkungwini, kaJavier Reverte
Impi yethu. Kusalindwe izenzo zokuzithoba, kwezepolitiki nezokubhala. Impi yombango yadlulisela kaningi ezincwadini zaseSpain. Futhi akukaze kulimaze umbono omusha, indlela ehlukile. Amafulegi asenkungwini ukuthi, indaba emayelana neMpi Yombango ...